Paris Saint-Germain oo halis gelineysa riyada kooxda Manchester United ee dhanka suuqa – Gool FM
Paris Saint-Germain oo halis gelineysa riyada kooxda Manchester United ee dhanka suuqa
Dajiye March 23, 2020
(Madrid) 23 Mar 2020. Daafaca kooxda kubadda cagta Napoli ee Kalidou Koulibaly ayaa xiiso xoogan ka helaya dhamaan kooxaha waa weyn ee Yurub, waxaana la filayaa in dagaal xoogan ay u galaan adeegiisa suuqa xagaaga soo socda.
Waxaa jiray warar sheegayay in Kalidou Koulibaly uu ku wargaliyay saraakiisha kooxda Napoli inuu doonayo inuu baxo suuqa xagaaga soo socda, si uu ugu biiro mid ka mid ah kooxaha Yurub ee xiiseynaya adeegiisa.
Sida laga soo xigtay wargeysyada ka soo baxa Faransiiska Kalidou Koulibaly ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu cad cad ee noqon kara badelka daafaca reer Brazil iyo kooxda Paris Saint-Germain ee Thiago Silva.
Sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in Daafaca kooxda kubadda cagta Napoli ee Kalidou Koulibaly uu yabooh ka helayo naadiga Real Madrid.
Manchester United ayaa loo arkaa inay tahay kooxda xiisaha ugu badan u qabta adeega Kalidou Koulibaly, inkastoo uu soo gaaray dhaawac laba jeer ah, isla markaana uu ciyaaray 15 kulan oo kaliya ee horyaalka Talyaaniga ah xilli ciyaareedkan, haddana sidaas oo ay tahay wuxuu ilaashaday qiimahii uu ka joogay suuqa.
10-ka ciyaaryahan ee ugu fiican Yurub xiddigaha da’doodu ka yar tahay 23-sano jirrada oo la shaaciyey… (Mbappe, Alexander-Arnold & Sancho oo ka mid ah)
Radja Nainggola oo ammaanay qaab ciyaareedka xiddig muhiim ka ah kooxda Real Madrid